Manchester United oo dalab ka gudbisay Samuel Umtiti, xili Barcelona ay jawaab cad ka bixisay – Gool FM
(Manchester) 30 Luulyo 2019. Manchester United ayaa markale muujisay xiisaha ay u qabto soo xero galinta daafaca kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti si ay ugu xoojisato safkeeda inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
United-ka ayaa dooneysay inay lasoo saxiixato Samuel Umtiti tan iyo xagaagii hore, kahor inta uusan qandaraaska u kordhinin kooxda Barcelona, markale Red Devils ayaa suuqan xagaaga dib u soo celisay xiisaha ay u qabto adeega daafaca reer France.
Waxay u muuqataa in xiisaha ay u qabto Manchester United laacibka Samuel Umtiti uu noqday mid ka sii daran sidii hore.
Wargayska “Le Sport 10” ee dalka France ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Red Devils ay miiska soo saartay aduun dhan 50 milyan euro si ay kaga iibsato Samuel Umtiti kooxda Barcelona.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in la diiday dalabka ay soo gudbisay Man United, iyadoo kooxda reer Catalonia ay dooneyso qiimo dhan 60 milyan euro si ay u iibiso Samuel Umtiti, taasoo la micno ah in maalmaha soo socda ay suurtogal noqon karto in horumar laga sameeyo heshiiskan.
Difaaca kooxda Man United ee Eric Bailly oo qalliin lagu sameeyey, xilli la xaqiijiyey mudada uu garoomada ka maqnaanayo